“Ma arkin Messi, miyuu ciyaarayay? Taageerayaasha qaranka Brazil oo ku kaftamay qaabka xun ee Lionel Messi. – Gool FM
“Ma arkin Messi, miyuu ciyaarayay? Taageerayaasha qaranka Brazil oo ku kaftamay qaabka xun ee Lionel Messi.
(Brazil) 30 June 2019. Xulka martigalinaya tartanka ee Brazil ayaa la ciyaari doona Argentina kulanka semi final-ka tartanka Copa America, balse jamaahiirta qaranka jaalayaasha wax walwal ah kama qabaan iney wajahanaan Lionel Messi.
Xaqiiqdii, qaar ka mid ah jamaahiirta Brazil oo wareysiyo looga qaadayo wadooyinka wadankooda ayaa aaminsan in 32-jirka ka tirsan Barcelona uusan wax saameyn ah ku laheyn qarankiisa, sidoo kalana waxey shaki galiyeen inuuba ciyaarayo tartanka Copa America.
“Ma arkin Messi, miyuu ciyaarayay?” ayuu taageere reer Brazil ah ku kaftamay.
“Miyuu ciyaarayaa kubadda cagta?”
Taageere kale ayaa isna yiri: “Messi waxba ma sameynin”
“Waa xiddig aan cadaadiska kasoo kici karin kulamada ugu muhiimsan”
“Waxey noqon doontaa ciyaar adag, balse Messi waxba ma sameyn doono”
“Brazil ayaa sidii waqtiyadii ugu dambeeyay 3-0 ku badin doonto”
Ugu dambeyntiina taageere ayaa u sheegay warbaahinta in Messi uu kaliya wax ku yahay Barcelona, balse uusan waxba ku aheyn qarankiisa.
Waa Maxay sababta Daniel Levy uu taleefoonka uga wacay maamulka Real Madrid si uu uga codsado iney iibsadaan Christian Eriksen?